ရနျကုနျတိုငျးအတှငျး အပွီးပိတျခွငျး၊ ယာယီပိတျခွငျးနှငျ့ လုပျသားလြှော့ခသြညျ့ စကျရုံ ၁၂၀ ကြျောရှိလာပွီဖွဈ ｜ News TRUSTY E-Commerce
Get Trusty App
Yangon Merchant List
Mandalay Merchant List
NayPyiDaw Merchant List
Cash Counter List
Yangon Counter List
Mandalay Counter List
NayPyiDaw Counter List
Bank Cash In List
Meter Bill Service
JL's Management Style
ရနျကုနျတိုငျးအတှငျး အပွီးပိတျခွငျး၊ ယာယီပိတျခွငျးနှငျ့ လုပျသားလြှော့ခြ...
ရနျကုနျတိုငျးအတှငျး အပွီးပိတျခွငျး၊ ယာယီပိတျခွငျးနှငျ့ လုပျသားလြှော့ခသြညျ့ စကျရုံ ၁၂၀ ကြျောရှိလာပွီဖွဈ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်မှု ဇုန် ၂၉ ဇုန်နှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် တစ်ခုရှိသည့်အနက် စက်ရုံအပြီးပိတ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်ခြင်းနှင့် လုပ်သားအင်အား လျှော့ချသည့်စက်ရုံ ၁၂၀ ကျော်အထိ ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ ၃၀ ရက်တွင် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရသည်။
မတ်လကုန်တွင် အပြီးပိတ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်ခြင်းနှင့် လုပ်သားအင်အားလျှော့ချသည့် စက်ရုံ ၅၉ ရုံသာရှိပြီး တစ်လအကြာတွင် နှစ်ဆကျော် ပိုမိုများပြားလာခြင်းဖြစ်သည်။
စက်ရုံ ၁၂၀ တွင် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသည့် လူဦးရေအား အတိအကျပြော၍ မရကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်က The Daily Eleven သတင်းစာသို့ ပြောကြားသည်။
“ စက်ရုံအပြီးပိတ်တာရယ်၊ ယာယီပိတ်တာရယ်၊ အင်အားလျှော့တာရယ် အားလုံးပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ကိုတော့ ကျွန်မတို့ အခုချိန်မှာ မှန်းလို့မရဘူး။ ပထမပိုင်း COVID-19 စဖြစ်တဲ့အချိန်ကာ လနဲ့ကိုက်ညီပြီးရင် ဘယ်စက်ရုံက ဘယ်လိုပိတ်လို့ ဘယ်လောက်လျှော့တယ်ဆိုတာ အတိအကျပြောလို့ရတယ်။ အခုက ပိတ်တဲ့စက်ရုံတွေပိတ်သလို ပြန်ဖွင့်တဲ့စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်ပြန်ရကုန်တဲ့ ကလေးတွေရှိနေကြတယ်။ ဒီအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကျွန်မတို့ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေကို အတိအကျတော့ မပြောနိုင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာပဲပြောပြော ဒီကာလပြီးအနေအထားအရတော့ အင်အားလျှော့တာနဲ့ နားနေတာနဲ့ တစ်သောင်းကျော်မှာရှိနေမယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ် ’’ ဟု ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်က ပြောကြားသည်။
အပြီးပိတ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်ခြင်းနှင့် လုပ်သားလျှော့ချသည့် စက်ရုံ ၁၂၀ ကျော်တွင် အလုပ်လက်မဲ့လူဦးရေ မည်မျှရှိကြောင်း မသိရသော်လည်း မတ် ၃၁ ရက်အထိ စက်ရုံ ၅၉ ရုံတွင် အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေခန့်မှန်း ၁ရဝဝဝခန့်ရှိကြောင်း ဝန်ကြီးဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်က ပြောကြားထားသည်။ ယင်းကြောင့် လက်ရှိ အလုပ်လက်မဲ့အလုပ်သမားဦးရေသည် မတ်လကုန် အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေထက် နှစ်ဆကျော် မြင့်တက်လာနိုင်သည်။
စက်ရုံများပိတ်ရာတွင် အလုပ်သမားများ ဥပဒေအတိုင်း အလုပ်ထုတ်နစ်နာကြေးများရရှိရန် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
လက်ရှိ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသာ အလုပ်သမားများ အလုပ်ပြန်လည်ရရှိစေရန် စက်ရုံများတွင် လူသစ်ခေါ်ယူခြင်း၊ စက်ရုံအသစ်ဖွင့်ခြင်းကြောင့် အလုပ်သမားသစ် လိုအပ်ခြင်းများရှိလျှင် မြို့နယ်အလုပ်သမားရုံးများ၌ အလုပ်ခေါ်စာများကပ်၍ အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ တစ်သောင်းကျော်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လောက်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့က သူတို့အလုပ်ကနေ အနားယူတယ်ဆိုရင် ပိတ်တဲ့စက်ရုံဆိုရင် ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးရမှာ၊ ဒါက ဌာနတွေရဲ့တာဝန်။ ရှေ့ဆက်ပြီး စားဝတ်နေရေးပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်ရမှာက သူတို့တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ ရဲ့ တာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။ ဒီကာလမှာခေါ်တဲ့ စက်ရုံက မရှိသလောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ပြန်ခေါ်လာနိုင်တဲ့ စက်ရုံတွေ၊ ရှိလာနိုင်တဲ့စက်ရုံတွေရဲ့ စာရင်းတွေရပြီဆိုရင် ကြေညာကပ်ပြီး လက်ရှိအင်အားလျှော့ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေးတွေ၊ အလုပ်ပိတ်သိမ်းသွားတဲ့ ကလေးတွေကို အချိန်မရွေး လေဘာကတ်လည်း အချိန်တိုအတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့၊ ပြီးတော့ ပြန်လည်လျှောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဌာနတွေကနေ အကြောင်းကြားပေးတာတွေ လုပ်ပေးပါတယ် ’’ ဟု ဝန်ကြီးဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အပြီးပိတ်ခြင်း၊ ယာယီပိတ်ခြင်းနှင့် လုပ်သားလျှော့ချသည့် စက်ရုံများတွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံများ အများဆုံးပါဝင်သည်။ အဆိုပါစက်ရုံများတွင် ကုန်ကြမ်းပြတ်လပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားမှအော်ဒါများ မှာယူမှုမရှိတော့ခြင်း ကြောင့် ပိတ်သောစက်ရုံအများဆုံးပါဝင်ပြီး အခြားအကြောင်းအရင်းများကြောင့် ပိတ် သောစက်ရုံများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စက်ရုံ အလုပ်သမားအများစုသည် ပြည်တွင်းရှိ ဒေသအသီးသီးမှ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ကြသူများဖြစ်ရာ စက်ရုံများပိတ်သိမ်းခြင်းကြောင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲများစွာဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး စကျမှု ဇုနျ ၂၉ ဇုနျနှငျ့ သီလဝါအထူးစီးပှားရေးဇုနျ တဈခုရှိသညျ့အနကျ စကျရုံအပွီးပိတျခွငျး၊ ယာယီပိတျခွငျးနှငျ့ လုပျသားအငျအား လြှော့ခသြညျ့စကျရုံ ၁၂၀ ကြျောအထိ ရှိလာပွီဖွဈကွောငျး ဧပွီ ၃၀ ရကျတှငျ တိုငျးအစိုးရအဖှဲ့မှ စုံစမျးသိရသညျ။
မတျလကုနျတှငျ အပွီးပိတျခွငျး၊ ယာယီပိတျခွငျးနှငျ့ လုပျသားအငျအားလြှော့ခသြညျ့ စကျရုံ ၅၉ ရုံသာရှိပွီး တဈလအကွာတှငျ နှဈဆကြျော ပိုမိုမြားပွားလာခွငျးဖွဈသညျ။
စကျရုံ ၁၂၀ တှငျ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈသှားသညျ့ လူဦးရအေား အတိအကပြွော၍ မရကွောငျး ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ လူ့စှမျးအား အရငျးအမွဈဝနျကွီး ဒျေါမိုးမိုးစုကွညျက The Daily Eleven သတငျးစာသို့ ပွောကွားသညျ။
“ စကျရုံအပွီးပိတျတာရယျ၊ ယာယီပိတျတာရယျ၊ အငျအားလြှော့တာရယျ အားလုံးပေါငျး ၁၂၀ ကြျောရှိပါတယျ။ အလုပျလကျမဲ့ကိုတော့ ကြှနျမတို့ အခုခြိနျမှာ မှနျးလို့မရဘူး။ ပထမပိုငျး COVID-19 စဖွဈတဲ့အခြိနျကာ လနဲ့ကိုကျညီပွီးရငျ ဘယျစကျရုံက ဘယျလိုပိတျလို့ ဘယျလောကျလြှော့တယျဆိုတာ အတိအကပြွောလို့ရတယျ။ အခုက ပိတျတဲ့စကျရုံတှပေိတျသလို ပွနျဖှငျ့တဲ့စကျရုံတှမှော အလုပျပွနျရကုနျတဲ့ ကလေးတှရှေိနကွေတယျ။ ဒီအခွအေနပေျေါမှာမူတညျပွီး ကြှနျမတို့ အလုပျလကျမဲ့ဦးရကေို အတိအကတြော့ မပွောနိုငျတော့ဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဘာပဲပွောပွော ဒီကာလပွီးအနအေထားအရတော့ အငျအားလြှော့တာနဲ့ နားနတောနဲ့ တဈသောငျးကြျောမှာရှိနမေယျလို့ ခနျ့မှနျးမိပါတယျ ’’ ဟု ဒျေါမိုးမိုးစုကွညျက ပွောကွားသညျ။
အပွီးပိတျခွငျး၊ ယာယီပိတျခွငျးနှငျ့ လုပျသားလြှော့ခသြညျ့ စကျရုံ ၁၂၀ ကြျောတှငျ အလုပျလကျမဲ့လူဦးရေ မညျမြှရှိကွောငျး မသိရသျောလညျး မတျ ၃၁ ရကျအထိ စကျရုံ ၅၉ ရုံတှငျ အလုပျလကျမဲ့ဦးရခေနျ့မှနျး ၁ရဝဝဝခနျ့ရှိကွောငျး ဝနျကွီးဒျေါမိုးမိုးစုကွညျက ပွောကွားထားသညျ။ ယငျးကွောငျ့ လကျရှိ အလုပျလကျမဲ့အလုပျသမားဦးရသေညျ မတျလကုနျ အလုပျလကျမဲ့ဦးရထေကျ နှဈဆကြျော မွငျ့တကျလာနိုငျသညျ။
စကျရုံမြားပိတျရာတှငျ အလုပျသမားမြား ဥပဒအေတိုငျး အလုပျထုတျနဈနာကွေးမြားရရှိရနျ အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာနက ဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ။
လကျရှိ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈနသော အလုပျသမားမြား အလုပျပွနျလညျရရှိစရေနျ စကျရုံမြားတှငျ လူသဈချေါယူခွငျး၊ စကျရုံအသဈဖှငျ့ခွငျးကွောငျ့ အလုပျသမားသဈ လိုအပျခွငျးမြားရှိလြှငျ မွို့နယျအလုပျသမားရုံးမြား၌ အလုပျချေါစာမြားကပျ၍ အကွောငျးကွားပေးမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈသှားတဲ့ တဈသောငျးကြျောဖွဈစေ၊ ဘယျလောကျဖွဈစေ ကိုယျ့ရဲ့ စားဝတျနရေေးအတှကျ ကိုယျကိုယျတိုငျ ပါဝငျဖွရှေငျးရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျမတို့က သူတို့အလုပျကနေ အနားယူတယျဆိုရငျ ပိတျတဲ့စကျရုံဆိုရငျ ဥပဒနေဲ့အညီဆောငျရှကျပေးရမှာ၊ ဒါက ဌာနတှရေဲ့တာဝနျ။ ရှဆေ့ကျပွီး စားဝတျနရေေးပွလေညျအောငျ ဆောငျရှကျရမှာက သူတို့တဈဦးတဈယောကျခငျြးစီ ရဲ့ တာဝနျကိုယျစီရှိပါတယျ။ ဒီကာလမှာချေါတဲ့ စကျရုံက မရှိသလောကျပါ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျမတို့ ပွနျချေါလာနိုငျတဲ့ စကျရုံတှေ၊ ရှိလာနိုငျတဲ့စကျရုံတှရေဲ့ စာရငျးတှရေပွီဆိုရငျ ကွညောကပျပွီး လကျရှိအငျအားလြှော့ခံလိုကျရတဲ့ ကလေးတှေ၊ အလုပျပိတျသိမျးသှားတဲ့ ကလေးတှကေို အခြိနျမရှေး လဘောကတျလညျး အခြိနျတိုအတှငျး ဆောငျရှကျပေးဖို့၊ ပွီးတော့ ပွနျလညျလြှောကျနိုငျဖို့အတှကျ ဌာနတှကေနေ အကွောငျးကွားပေးတာတှေ လုပျပေးပါတယျ ’’ ဟု ဝနျကွီးဒျေါမိုးမိုးစုကွညျက ဆကျလကျပွောကွားသညျ။
အပွီးပိတျခွငျး၊ ယာယီပိတျခွငျးနှငျ့ လုပျသားလြှော့ခသြညျ့ စကျရုံမြားတှငျ အထညျခြုပျစကျရုံမြား အမြားဆုံးပါဝငျသညျ။ အဆိုပါစကျရုံမြားတှငျ ကုနျကွမျးပွတျလပျခွငျး၊ နိုငျငံခွားမှအျောဒါမြား မှာယူမှုမရှိတော့ခွငျး ကွောငျ့ ပိတျသောစကျရုံအမြားဆုံးပါဝငျပွီး အခွားအကွောငျးအရငျးမြားကွောငျ့ ပိတျ သောစကျရုံမြားလညျးရှိကွောငျး သိရသညျ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးရှိ စကျရုံ အလုပျသမားအမြားစုသညျ ပွညျတှငျးရှိ ဒသေအသီးသီးမှ ရှပွေ့ောငျးလုပျကိုငျကွသူမြားဖွဈရာ စကျရုံမြားပိတျသိမျးခွငျးကွောငျ့ မိသားစုစားဝတျနရေေးအတှကျ အခကျအခဲမြားစှာဖွငျ့ ရငျဆိုငျနရေကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
Source from eleven,myanmar harp
Trusty E-Commerce Software Download
We will inform log in information by SMS after completed. Please download “Trusty E-commerce customer” App in App Store for IOS & in google Play Store, Mi Store, Baidu.com for Andriod Download.
Trusty E-commerce For Customer
Trusty E-commerce For Merchant
09967666888 (System Service)
09967666777 (General Service)
09967666999 (Exchange Rate)
User Guide Merchant
Trusty E-Commerce supports Small and Medium Enterprises (SMEs) to be Rich
Copyright© TRUSTY E-Commerce. All right reserved.